Moments Neshamwari 20
Iva nemafungiro evanhu uye vanofunga here?
Dzimwe mhuka dzinoratidza kugona kunoshamisa kunzwisisa izvo zvinotaurwa kwavari uye vanozoita zvavanenge vaudzwa sekunge vanzwisisa. Mhuka hadzina pfungwa sezvo munhuwo zvake achinzwisisa izwi iri, kana kumbofunga, kunyangwe hazvo vachiita kunge vanonzwisisa zvakawanda zvinotaurwa kwavari uye vanozoita zvakawanda zvezvinhu zvavanonzi vaite. Pfungwa ndiyo yakasarudzika musimboti yemurume iyo inomukonzera uye inoita kuti azvifunge saIye-I-ini. Mhuka hadzina uyu musimboti uye hapana mune zvavanoita kana maitiro vangaratidza kuti vanazvo. Vasina pfungwa, havagone kufunga nekuti kufunga kunogoneka chete nekuvapo kwepfungwa nechishuvo. Mhuka dzinoshuva seyadzo huru uye inosimbisa musimboti, asi ivo havana pfungwa sekunge vane miviri yemhuka.
Mune imwe pfungwa yakatosiyana pane iyo yemunhu, mhuka ine pfungwa. Iyo pfungwa iyo iyo mhuka inogona kunzi ine pfungwa ndeyekuti inoita kubva mukumanikidzwa kwepfungwa dzepasirese, pasina chero humwe humwe humwe humwe mutemo. Mhuka imwe neimwe, iyo isiri iyo pakarepo pasi pesimba remunhu, inoita maererano nemhando yayo. Mhuka haigoni kuita zvakasiyana nekwainga, iko iko mhuka yemhuka. Munhu anogona kuita maererano nemhuka yake zvisingaiti, kana zvichienderana nehumwe hunhu hwevanhu uye tsika dzemagariro kana bhizinesi, kana iye anogona kupfuudza mhuka nemunhuwo zvake oita mushe nenzira yakafanana naMwari. Iyi sarudzo yesarudzo yake iyo murume anayo, inogoneka nekuti iye ane pfungwa kana pfungwa. Kana iyo mhuka yakanga iine kana yakanga iri pfungwa zvaigoneka kuti imwe sarudzo yakadaro ionekwe mukuita kwayo. Asi mhuka haife yakamboita zvakasiyana neyemhando yacho, uye inofungidzira kuti ndeyemhuka uye chiito. Izvi zvese zvinoshanda kumhuka iri munzvimbo yayo yemukati uye yemadzinza kana mamiriro uye kana isina kukanganiswa kana kuuya pasi pesimba remunhu. Kana munhu akaunza mhuka pasi pesimba rake iye anoshandura mhuka iyoyo kusvika pamwero waanoshandisa pesvedzero yayo pairi. Munhu anokwanisa kushandisa simba rake repfungwa pane mhuka nenzira imwecheteyo yaanoshandisa kufurira kwake kwepfungwa pane iyo mhuka iye amene. Kuda ndiwo musimboti wemhuka, pfungwa hunhu hunhu hwemunhu. Chido ndiyo mota yepfungwa. Chido inyaya inoshanda nepfungwa. Chikonzero chekuti mhuka dzidzidziswa kuteerera mirairo yemunhu imo nekuti musimboti wechido unozopindura kuchiito chendangariro uye uteerere zvarinotaura apo pfungwa dzinopfuurira mukuedza kwayo kutonga mhuka. Mhuka saka haite zvekufunga kana uchiita zvakarairwa nemurume. Mhuka inongoteerera ichingozvifunga iyo pfungwa yeiyo inotungamira iyo. Mumuenzaniso weizvi zvinogona kutaurwa kuti hapana mhuka yaizivikanwa kuti inzwisise uye yekuteerera iko kuraira kwakasiyana nemamwe mirairo isati yapihwa. Chinhu chimwe nechimwe chinoita icho chakafanana nerudzi kune izvo izvo zvakadzidziswa nemunhu kuti aite. Hunhu hwepfungwa kuronga, kuenzanisa, kutanga. Hakuna mhuka inokwanisa kana kuronga chinhu kuronga chinhu, kuenzanisa nekukakavara, kana kuzvitangira kuita kwechiitiko choga kana chimwe mhuka. Mhuka dzinoita zviito kana kuteedzera mirairo nekuti ivo vakadzidziswa uye nekudzidziswa kuzviita nekuzviteerera uye izvi zvinokonzerwa nepfungwa yemunhu yakakandirwa kuchifiso chemhuka iyo inoratidza kufunga kwayo mukuita.
Ichave nehuipi huipi hunoshandiswa hunoendeswa kuvanhu kuburikidza nekuvapo kwezvipfuwo zvemhuka?
Izvo zvinoenderana nemunhu wenyama kudarika zvaanoita pamhuka. Imwe neimwe inogona kubatsira imwe, asi nezvekuti rubatsiro rwakawanda sei kana kukuvara rwaitwa rinofanira kusarudzika nemunhu. Mhuka inobatsirwa nekubatana nemunhu kana murume achizodzidzisa nekudzora mhuka nemutsa. Mhuka iri munzvimbo yayo yemusango uye yemusango haitsvage rubatsiro kubva kumunhu, asi kana ichibereka uye ichiisa mukati mevanhu ichiunza mhuka pasi pesimba repfungwa, mhuka haichakwanisi kana mukana wekuvhima chayo chikafu chayo uye choga . Ipapo munhu anozove nemhosva kune iyo mhuka; uye mushure mekutora mutoro wakadai ibasa remunhu kuchengeta nekuchengetedza mhuka. Munhu haaite izvi nekuti anoshuva kukwidziridzwa uye nedzidzo yemhuka asi nekuti anoshuva kuisa mhuka yake kushandisa kwayo. Nenzira iyi isu takadzora mhuka dzakadai sebhiza, mombe, gwai, mbudzi, imbwa neshiri. Mitezo inoraramisa miviri yemhuka iri kudzidziswa kune zvimwe zvinoshandiswa pamwe nemiviri yemhuka kugadzirira kuraramisa muviri wemunhu mune imwe ramangwana rekushanduka kana nyika. Nenzira iyi pane kuchinjana kwakaitwa pakati pemhuka, uye munhu. Mhuka inodzidziswa nemurume nekuda kwemasevhisi ainoita munhu. Musimboti wekuda kwemhuka unoitwa nepfungwa dzemunhu, uye nekuita kwakadaro uye nekuita izvo hunhu hwemhuka hwakagadzirirwa nenhungamiro yemunhu yepfungwa dzemunhu, zvekuti mune imwe nguva iri kure iyo pfungwa yekuda yemhuka inogona kuuyiswa kune imwe nzvimbo ichiitendera kuti ibatane pakarepo uye zvakananga nepfungwa. Munhu anozadzisa basa rake zviri nane kana akaita basa rake nehungwaru uye nemufaro panzvimbo yekumanikidzwa kwemamiriro ezvinhu nekutsutsumwa. Munhu anozobatsira mhuka kana iye achivafarira muchiedza chakarondedzerwa uye achavabata nemutsa uye nekufunga uye ovaratidza chidakadaka. ivo vaizopindura zvido zvake nenzira yaizomuvhundutsa. Mukuvaratidza rudo, zvisinei, hanya inofanirwa kurovedzwa. Kudanana kwakadaro hakufanirwe kunge kuri kweanopenga uye anonatsa kukumbira, asi rudo urwo munhu anonzwira mweya kune zvese zvipenyu zvipenyu. Kana munhu aigona kuita izvi aigona kusimudzira mhuka uye ivo vaizomupindura nenzira iyo yaizoitisa murume aripo kuti afunge zvechokwadi kuti mhuka dzaive nehungwaru mupfungwa yekuve neiyo mafungiro ekufunga. Asi kunyangwe zvakadaro, kana mhuka yacho ikaita seyakaita zvakatonyanya kuchenjera kupfuura zvakanakisa izvozvi ivo havasati vachizopihwa simba rekufunga kana neiyo yekufunga yekufunga.
Kushamwaridzana pakati pemunhu nemhuka kwakaipa uye kwakashata kana mhuka dzichiburitswa kubva mudanga radzo nevanhu vasina kuchena uye dzichiitwa kuzadza nzvimbo isati iri mhuka, yemunhu kana yehumwari. Izvi zvinoitwa nevarume kana vakadzi vanoedza kuita chifananidzo kubva mune imwe mhuka yemhuka. Kazhinji imbwa kana katsi inosarudzirwa nechinangwa chakadai. Iyo peturu inoitwa chinhu chinonamatira kana chokunamatira. Murombo munhu ari kudurura kubva pamoyo unopfachuka hupfumi hwemashoko akapusa pane chinhu chekuzvinamatira. Kunamatwa kwezvipfuyo kwaendeswa kune kwakanyanyisa kuita kuti chipfuyo chiwanikwe muzvinozvino kana mafashoni akasarudzika uye yakagadzirwa kupfeka mitsipa yemukati kana zvimwe zvishongo, uye kuve nehunyanzvi hwakashongedzwa kuvarindi hwekuchenesa zvinonhuhwirira nekudyisa. Pane imwe nguva ivo vaifamba nembwa kana kuidhonzera mune yakatakurwa yakakosha kuti ive nemhepo nyowani isina kupera simba. Iyo peturu yakasimudzirwa kuburikidza nehupenyu hwayo uye parufu payakaiswa yakaiswa mubhokisi rakajeka; mhemberero dzakaitwa pamusoro payo uye ndokuzoteverwa nemunamati wayo neshamwari dzake kumakuva akanyatsogadzirirwa, kwayakange yakaradzikwa munzvimbo dzakanakisa uye chifananidzo chakaiswa pamusoro pacho kuti chiyeuke chiitiko chinosiririsa. Mhuka haifaniri kupomerwa mhosva yakadai. mhosva yese inofanirwa kunamatira kumunhu. Asi mhuka inokuvadzwa neichi chiito nekuti inobviswa munzvimbo yayo yemusikanzwa ndokuiswa muchikamu chisiri chake. Izvo hazvina kukodzera kupindirazve nzvimbo iyo kubva kwaakatorwa uye haikwanisi kuita zvakasikwa, zvine mushe uye nenzira yakakodzera munzvimbo yakapihwa neakashata yemunhu. Kuita kwakadai kushungurudza mukana wechinzvimbo nemunhu, uyo anozoregedza zvese zvirinani uye nekudzvanywa nekushungurudzwa kwakadaro kune chinzvimbo chimwe muhupenyu hwamangwana. Mukana wakanganiswa wechinzvimbo, kutambisa mari, kushatiswa kwevamwe vanhu mukumanikidza kuti vave vashandi vechipfuyo, uye mukukanganisa mhuka kunzvimbo iyo yaakapihwa, zvese zvichabhadharwa mukutambudzika, mukuodzwa mwoyo uye kusvotwa muhupenyu hwamangwana. Kune zvishoma zvirango zvakanyanyisa kumunhu munhu anoita chidhori kunze kwemhuka uye anonamata mhuka iyoyo. Kuita kwakadai kuyedza kuita mwari angangove muranda wechikara, uye kuedza kwakadaro kunofanirwa kugashira nzvimbo dzayo dzakangwara.
Mune mamwe mamiriro ezvinhu pesvedzero yemhuka inokuvadza zvakanyanya kune vamwe vanhu. Semuenzaniso, kana munhu asina kusimba kana akarara katsi kana imbwa nyowani haifanirwe kubvumidzwa kubata muviri, nekuti kana muviri usina kuvapo kwepfungwa kana pfungwa dzisiri kuziva mumuviri wemunhu, mhuka yemagineti yenyama yemunhu ichakwezvwa ne imbwa kana katsi kana imwe mhuka inoibata. Mhuka inoberekana yabata padyo kana yabata muviri wemunhu nekuti inogamuchira humwe hunhu kubva pairi. Chiratidzo cheizvi ndechekuti imbwa, iyo imbwa nyanya kunyanya, ichagara ichikwakukira kumuviri wemunhu. Izvi anozviitira nechinangwa chekaviri; kuitira kuti abviswe, asi kunyanya nekuti anogamuchira imwe simba remagineti kubva mumuviri wemunhu waanogadza. Zvinogona kunge zvichizivikanwa kazhinji kuti katsi inosarudza mumwe munhu akarara uye ichazvinyudza pachavo pachipfuva chake uye purrgi inogutswa sezvo inobata magineti emunhu akarara. Kana izvi zvikaenderera mberi husiku humwe nehusiku munhu anoshaya simba kusvika pakufa. Nekuti mhuka dzinogona kutora magineti kubva kumunhu, izvo hazvifanirwe kukonzera kuti murume arambe mhuka kana kuti asaitire mutsa, asi panzvimbo pezvo amuite kuti ashandise kutonga kwake pakubata nemhuka, avaratidze mutsa uye rudo urwo murume anofanira kunzwa kune vese vapenyu zvisikwa; asi anofanirawo kuvadzidzisa nekurovedza, izvo zvinozovadzidzisa muzvisikwa zvinoshanda uye zvinoshanda, panzvimbo pekuvabvumira kuita sezvavaida, nekuti angave ane usimbe zvakanyanya kana asina hanya kuti avadzidzise kana nekuti anoratidza kupusa uye nekunyanyisa. kuregererwa kwekumanikidza kwavo.